आज युरोपा लिग उपाधि भिडन्त, एथ्लेटिको मड्रिड र मर्सेली भिड्दै, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
आज युरोपा लिग उपाधि भिडन्त, एथ्लेटिको मड्रिड र मर्सेली भिड्दै
एजेन्सी । युरोपा लिग उपाधिका लागि आज स्पेनिस क्लब एथ्लेटिको मड्रिड र फ्रेन्च क्लब मर्सेलीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ ।
एथ्लेटिको मड्रिड र मर्सेलीबीचको खेल नेपाली समय अनुसार आज राति साढे १२ बजे फ्रान्समा सुरु हुनेछ । यसअघि सन् २००८–२००९ को सिजनमा च्याम्पियन्स लिगमा दुवै टोलीको भेट भएको थियो ।
जसमा स्पेनको एथ्लेटिको विजयी भएको थियो । दश वर्षमा पहिलो पटक आमने सामने हुन लागेका दुवै टोलीबीचको खेल रोमान्चक हुने अनुमान गरिएको छ । २ पटक युरोपा लिगको फाइनलमा प्रवेश गरेको एथ्लेटिको २ पटकनै उपाधि विजेता बनेको छ ।
मर्सेलीपनि दुई पटक फाइनलमा पुगेको छ । तर दुवै पटक उसले फाइनलमा दोस्रो स्थानमै चित्त बुझायो ।
यस पटक स्पेनिस ला लिगा जित्न असफल एथ्लेटिको, च्याम्पियन्स लिग र कोपा डेल रे कपबाट पनि खाली हात फर्कन बाध्य भयो । आजको खेल जित्दै एथ्लेटिको सिजनको पहिलो टाइटल हात पार्ने दाउमा हुनेछ ।
यसैगरी दुई पटक उपविजेतामै सीमित बनेको मर्सेलीपनि आज तेस्रो पटक उपाधि भिडन्त गर्दैगर्दा एथ्लेटिकोलाई खाली हात घर पठाउन चाहान्छ । एथ्लेटिको स्पेनिस लिगमा यतिबेला दोस्रो स्थानका लागि लडिरहेको टोली हो भने मर्सेली लिग वानमा तेस्रो स्थानका लागि लडिरहेको टोली हो । दुवै टोली बलिया छन् ।
आज एथ्लेटिकोको तर्फबाट एन्टोनी ग्रिजम्यान, डिएगो कोष्टा लगायतका पहिलो रोजाइकै खेलाडी मैदानमा उत्रने छन् । मर्सेलीपनि आफ्ना पहिलो रोजाइकै खेलाडी सहित मैदानमा उत्रने छ ।